माउन्टेन खेलकुद | साहसिक प्रेमी | The Indian Face - THE INDIAN FACE
यदि हामीसँग टीमको बीचमा केहि स्पष्ट छ भने The Indian Face, के यो त्यस्तो ठाउँ हो जुन खोज्न र स्वतन्त्र हुन चाहेको कुरा भेट्टाउछ जुन कहिलेकाँही हामीसँग हाम्रो दिन मा छैन, हिमालको बाहेक अरु हुन सक्दैन। यो यस्तो छ किनकि यो त्यहाँ छ जहाँ हामीले धेरै थोरै ठाउँहरू देख्न सक्छौं, जहाँ हामी प्रकृतिमा यसको शुद्ध राज्यमा डुबेका छौं। हिमालहरूको त्यो यात्राबाट जहाँ हामीलाई साहस र भावनाको लागि बोलाइन्छ, हामीलाई के मनपर्दछ त्यो हामीलाई प्रदान गर्ने स्वतन्त्रता हो। आफैंको विस्तार, सबै अचानक भावनाहरू जुन हामी त्यस्तो क्षणमा महसुस गर्छौं, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा: हामी जीवित छौं भन्ने भावना। केहि हिमालसँग तुलना गर्न सक्दैन र केहि जस्तो छैन। हामी प्रभावशाली असहाय पहाड, फजर्ड, ताल र ज of्गलका प्रेमी हौं, जुन जुनसुकै उत्कटताका साथ प्रवेश गर्छौं र यसका सडक र बाटोहरूमा कुनै डर बिना हामी जान्दछौं कि हामी प्रकृतिले प्रदान गरेको आश्चर्यको कारण हामी छक्क पर्दै छौं, सधैं साथ खेलकुद सामान हामीलाई उपयोगी सूर्य र तत्वबाट जोगाउनका लागि अधिक उपयोगी र आवश्यक छ।
खेल, जोश, यो आरोहण र पर्वतारोहणको फिगर हो जुन सम्भवतः हामीले यसमा अवस्थित तत्वहरूसँगको स्वतन्त्रता र सद्भावको भावनालाई सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व गर्दछ। त्यस्तै गरी, यदि त्यहाँ केहि चीजहरू छन् जुन हामी वास्तवमै निश्चित छौं, यो यो हो कि हिमालयले खेलकुद अभ्यास गर्न धेरै संभावनाहरू प्रदान गर्दछ, जहाँ हामी लगभग कुनै पनि बाह्य गतिविधिहरू गर्न सक्दछौं, आजको समयमा यसबाट प्रदान गरिएको स्वतन्त्रतालाई थाहा छ। त्यहाँ के सबै भन्दा आकर्षक र उल्लेखनीय गतिविधिहरू छन् जुन हरेक प्रेमीको साथ प्रेममा परिणत भएको छ र पहाडको बारेमा भावुक?
पहाड प्रेरणाले भरिएको छ ... यो हामीसँग फेला पार्नुहोस्!
अनुशासन तपाईं माउन्टानमा व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ
माउन्टेन बाइकि।: हाम्रो #IndianSpirits तिनीहरू चरम खेलहरू जस्तै माउन्टेन बाइकि .को बारेमा उत्साहित छन्। यो गाह्रो सडकहरूमा गरिन्छ, जसमा ठाडो ढलानहरू, र महत्वपूर्ण डाउनराइटहरू छन्। यो एक धेरै नै सुन्दर गतिविधि हो, एकै साथ यो अत्यन्तै रमाईलो पनि छ: असम्भव चढेको कारणले तर प्रभावशाली परिदृश्यको कारण जुन हामीले हाम्रो पेडल टुरबाट देख्न सक्छौं। कुनै श doubt्का बिना, तपाइँको शरीर र दिमागलाई परीक्षणमा राख्ने एउटा तरिका, जबकि एक उत्तम सम्भावित परिदृश्यको पनि रमाईलो गर्दै।
ट्रेल चालू: साइकल चलाउन समान, तर दौडको समावेश गर्दछ। तर कहाँ? माउन्टेनले जहाँ छोड्छ र तपाईं त्यसो गर्न तयार महसुस गर्नुहुन्छ। तपाईं स्ट्रिमहरू, नदीहरू, ठाडो गिरावटहरू पार गर्नुहुनेछ ... संक्षेपमा, यसको अर्थ प्राकृतिक वातावरणमा नस्ल हुनु भनेको न्यूनतम पक्की मार्गहरू सहित।यसको अर्को संस्करण पनि छ, एउटा सबैभन्दा लामो दूरीको, “अल्ट्रा-ट्रेल चलिरहेको” हो। अल्ट्रा-ट्रेलले चाहिने कुरा शारीरिक माग हो, किनकि मार्गको क्रममा विभिन्न प्रकारका भूभागहरू सामना गर्दछन्, जहाँ केहि बढी वा कम गाह्रो हुन सक्छ, र तपाइँ यसको लागि साँच्चिकै तालिम प्राप्त गर्नु पर्छ।
क्यानोनिंग: जब हामी यो शब्द पढ्छौं, धेरैजना सुरुमा पछाडि फर्कन्छन्। स्पानिश फेडरेशन अफ माउन्टेन स्पोर्ट्स एण्ड क्लाइम्बिंगले व्याख्या गरेझैं क्यानोनिंग भनेको खेलकुद अभ्यास हो जुन क्यानियन वा खोलाहरू, स्ट्रिम बेड वा हिमाली नदीहरू दुवै पैदल र पौडी खेल्ने माध्यमबाट हुने प्रगति हो। कुनै श doubt्का बिना, यो चरम खेल र साहसिक सही प्रेमीहरूको लागि हो। तर जहिले जहिले पनि स्तरहरू हुन्छन्, र धेरै स्थानहरू जहाँ तपाईं यसलाई अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ मानिसहरूका साथ मार्गदर्शन गर्न र निर्देशनका लागि। मजा लिन तपाईंले जोखिमहरू लिनुपर्दछ!
ट्रेकि:: हाईकिंग भनेको के हो हामी सबैलाई थाहा छ। र होइन यो पहाडमा मात्र हिडिरहेको होइन। यो एक गैर प्रतिस्पर्धी पर्वतारोहण विशेषता हो, जुन पैदल यात्रा गर्ने मार्गहरू समावेश गर्दछ, प्रत्येक देश वा क्षेत्रको संगठनहरू द्वारा अनुमोदित मार्गहरूमा। यसको उद्देश्य सँधै प्राकृतिक ट्रेवलको माध्यमबाट प्राकृतिक वातावरणमा प्रवेश गर्नु हो: शारीरिक व्यायाम गर्ने र प्रकृतिको साथ सम्पर्कको एक तरीका। पैदल यात्राको बारेमा केहि राम्रो कुरा हामी अन्य हिमाली प्रेमीहरूसँग समुदाय सिर्जना गर्न फेला पार्न सक्ने संघहरू र क्लबहरूको संख्या हो।
त्यसबेला: यसलाई "हाईकिंग" पनि भनिन्छ र यो पैदल यात्राको विशेषता हुनेछ तर यसलाई ठूलो प्रयास चाहिन्छ। थपको रूपमा, यसको अर्थ यो बिना ट्रेलहरू भएका ठाउँहरूमा हिंड्नुको मतलब हामीले विभिन्न स्थानहरू, घाटीहरू वा ज fore्गलहरू भेट्टाउन सक्दछौं। यसलाई अधिक "कडा" हाईकिंग जस्तो चीज भन्न सकिन्छ।
चढाई: कस्लाई The Indian Face हाम्रो धेरै #IndianSpirits तिनीहरूले हाम्रो टोपी लगाएका छन् Born To Climb। यो किनभने ठाडो ढलान माथि कुनै पनि चढ्न, चाहे सरल होस् वा जटिल, आरोहणको रूपमा लिइन्छ। हामीले मानसिक र शारीरिक दुबैलाई आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्नै पर्छ। यसबाहेक, यस संसारमा त्यहाँ विभिन्न स्तरहरू छन् किनकि त्यहाँ धेरै जोखिम बोक्ने उचाइहरू छन्। यो कुनै अपवाद बिना मा पहाड भित्र साहसिक खेल को एक अर्को हो। त्यहाँ छुट्ने प्रकारका बिभिन्न प्रकारहरू छन्: क्लासिक, अल्पाइन, बरफ ... यो खेलकुद शाखामा भेट्न सकिने अवरोधका कारण राम्रो सुरक्षा उपकरण प्राप्त गर्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ।
माउंटेन चढाई: हिमालहरूमा स्पोर्ट मोडेलिटीहरूको सब भन्दा पुरानो। यो आरोहण शिखरहरूको कार्य हो, या त लक्ष्य वा शिखरमा पुग्ने भ्रमका लागि, वा केवल हाम्रो आँखाको अगाडि रहेको परिदृश्यको मजा लिन्छ।
स्की: हाम्रो # भारतीय स्पिरिट्सको मनपर्ने खेलको अर्को, जहाँ हामीसँग सँधै हाम्रा सहकर्मीहरू छन् Uller@! अनुशासन जुन धेरैले विश्वास गर्दछ कि सबैभन्दा पूर्ण खेलहरू अवस्थित छन्, किनकि तपाईंले यो काम गर्दा तपाईंको सम्पूर्ण शरीर काम गर्दछ। वा तपाईं भन्दा बढि हुनुहुन्छ स्नोबोर्डि?
निस्सन्देह, यी सबै विषयहरूमा र पहाडमा चरम खेलहरूको अर्थ खेलकुद भन्दा बढी हो: ती मतलब जीवनको मार्ग। संसारसँग, प्रकृतिसँग, र खेलहरू मार्फत आफैसँग तिनीहरूसँग सम्पर्कमा आउने एक तरीका। हामी पक्का छौं कि गत जुन जुन हामीले आफ्नो घर छोड्नुपर्‍यो, धेरैले पहाड चढ्न र त्यहाँ सास फेर्ने साँचो स्वतन्त्रताको आनन्द लिन फर्कने हिचकिचाएनन्।
पवित्रता, शान्ति, शान्त र हल्काता, पहाडहरूमा तपाईं आफैंलाई आदर गर्नुहुन्छ जसरी तपाईं वरपरको प्रकृतिलाई आदर गर्नुहुन्छ। तपाईं आफू जानको लागि आफू तयार हुनुहुन्छ, ती पहाडहरू खोज्दै जहाँ तपाईं बस्नुहुन्छ सबैभन्दा नजिकको नजिक वा आफैलाई राम्रो खेलकुद उपकरणको साथ तयार गर्न विभिन्न गतिविधिहरू गर्न। कुनै श doubt्का बिना, मानसिक तयारी पनि यी धेरै जसो धेरै लागि महत्वपूर्ण छ, विशेष गरी यदि तपाईं ती मध्ये कुनै प्रतिस्पर्धा गर्ने योजना बनाउनु हुन्छ। तर जहाँसम्म तपाईं पहाड र यसमा हुने सबै चीजको बारेमा भावुक हुनुहुन्छ, के तपाईंलाई त्यहाँ के हुन्छ भन्ने बारे सबै थाहा छ जस्तो लाग्छ? केहि राम्रो gafas de sol polarफहराया तिनीहरूले तपाईंलाई शीर्षको बाटोमा तपाईंको पर्खाइको सबै विवरणहरू राम्रोसँग देखाइनेछ ... तिनीहरूलाई घरमा नत्याउनुहोस्!
माउन्टाइनहरूको बारेमा CUIOSITIES तर तपाईंले थाहा नपाउन सक्नुहुन्छ
पृथ्वीको सतह पहाडहरूले भरिएको छ, र विश्वको १२% जनसंख्या तिनीहरूमा बास गर्छन्। विजेता नेपाल हो, जुन यसको सतहको% 12% तिनीहरू द्वारा कब्जा गरिएको छ।
अन्तरिक्षमा यात्रा गरेका र सगरमाथामा पुगेका एकमात्र व्यक्ति नासाका स्कट प्याराजेन्स्की हुन्। २० मे, २०० On मा, उहाँ सगरमाथाको टुप्पामा पुग्नुभयो र त्यहाँ अपोलो ११ दलले स had्कलन गरेको सानो मूनस्टोन छोड्नुभयो।
एन्डिज विश्वका सब भन्दा अग्लो पहाडहरू हुन्, पहाड श्रृंखला जुन countries,7.600०० किलोमिटर भन्दा कम (300०० किलोमिटर अधिकतम चौडाइको साथ) सात देशहरू हुँदै: अर्जेन्टिना, बोलिभिया, चिली, कोलम्बिया, इक्वेडर, पेरू र भेनेजुएलाबाट चल्दैन।
चढ्न बाँकी सब भन्दा अग्लो पहाड भूटान र चीनको काü्कर पेन्जुम हो जुन विश्वको th० औं उच्च पर्वत हो। धार्मिक कारणहरूले गर्दा उनको आरोहण निषेध गरिएको छ, र त्यस कारणको लागि ऊ अपशब्द जारी छ।
हामी यसलाई कसरी मापन गर्दछौं, सगरमाथा पृथ्वीमा सब भन्दा अग्लो पहाड होईन: यो मौना के ज्वालामुखी हो (हवाईमा यसको अर्थ "सेतो पहाड" हो) जुन यसको आधारदेखि माथिसम्म १०,२०10.203 मिटर मापन गर्दछ, यद्यपि सतहबाट केवल ,,२4.213 मिटर उचाइ रहेको छ। । सामान्यतया, मौना Kea खगोलशास्त्रीय अवलोकनको लागि आदर्श स्थान हो किनभने यसको शिखर सम्मेलन वातावरणको %०% भन्दा बढी छ, जसले एक बर्षमा 40०० स्पष्ट रात अनुमति दिन्छ।
टेक्टोनिक प्लेटहरूको आन्दोलनले सगरमाथाको उचाई प्रत्येक वर्ष mill मिलिमिटरले वृद्धि गर्दछ। ,,२०4 मानिसहरूले यसमा चढेका छन् र कम्तिमा २ 6.208० जना मरेका छन्। यो विश्वको सब भन्दा अग्लो पहाड हो, ,,240 meters at मिटरमा, तर यदि यो सौर्यमण्डलको सब भन्दा अग्लो पहाड ओलम्पससँग तुलना गर्यौं भने यो सानो छ: यो मंगलमा छ र २ 8.848 मापन गर्छ। किलोमिटर अग्लो।
र अन्तिम तर कम से कम, बाट The Indian Faceहामी पहाडहरूको ख्याल राख्नुको महत्त्वको लागि अपील गर्न चाहन्छौं कि हामी विश्वास गर्छौं कि यो हो। यसको संरक्षण पनि ती सबैमा निर्भर गर्दछ जो जान्छन् र यसले हामीलाई प्रदान गर्दछ सबैको आनन्द लिन्छन्। त्यसकारण, जब हामी पहाडमा जान्छौं हामीले फोहोर झोलाहरू आफैंले आफैंले उत्पन्न गरेको फोहोर हटाउन सक्षम हुनै पर्छ, उनीहरूको क्षेत्रलाई सँधै सम्मान गर्नुहोस् कुनै पनि कुरा टाढा नफोर्न र हामी हुन सक्ने कुनै पनि आगोसँग विशेष ध्यान दिनुहोस्।
हिमालले हामीलाई यति धेरै प्रस्ताव गर्छ कि हामीले त्यसलाई उस्तै समान सम्मान गर्नुपर्दछ, ताकि हामी त्यस स्थानमा रहन सक्दछौं जहाँ हामी पुग्न सक्दछौं र साँचो स्वतन्त्रताको आनन्द लिन सक्दछौं जुन हामी उनीहरू प्रवेश गर्दा हामी खोज्छौं। तपाइँको मनपर्ने खेल र पहाड के हो? यदि तपाईंले पहाडी जीवन र साहसिक खेलकुदलाई अझै मौका दिनुभएन भने, केहि बेर पर्खनुहोस्! तपाईं निश्चित रूपमा निराश हुनुहुने छैन… र नबिर्सनुहोस् तपाईंको ल्याउनुहोस् gafas de sol र तिमी खेल टोपी!
प्रकृतिले २०२१ मा पहाडहरूलाई निम्तो दिन्छ! र हामी खेलकुद मनपराउँदछौं, विशेष गरी यदि यो पहाडहरूमा नै हो भने! त्यहाँ खेल को एक महान विविधता को साथ तपाईं त्यो विज्ञापन पाउन सक्नुहुन्छ